Vavaka ho an'i Masindahy Anthony hahitana tena fitiavana [+ Mahery]?
Ny vavaka amin'i San Antonio hahitana fitiavana, ny fikatsahana fitiavana marina dia zavatra iray mahatonga ny olona maro ho be atao sy hiahiahy. Izany no antony mahatonga azy ireo matetika ny filana hanao a vavaka amin'i San Antonio hahitana fitiavana, mba hanampiana azy ireo hahitana izany.
Ny fahatanterahan'ny olona dia afaka ny hanomboka ny fianakaviany manokana ary noho izany, ny ankamaroany, dia mila mpiara-miasa hiaraka aminy mandritra ny fizotrany izy ireo.
Lasa ny varotra marina ny fitiavana marina, ka manilika loatra ka matetika isika no miandry modely marina izay varotra amidiny amin'ny sarimihetsika, boky sy fiarahamonina amin'ny ankapobeny.
Voalohany, tsy maintsy avelatsika io hevitra io, ny fitiavana dia afaka manaitra antsika amin'ny fomba izay tsy eritreretintsika fotsiny, noho izany dia tokony ho vonona isika ary am-po misokatra handray azy rehefa manapa-kevitra ny ho tonga.
Mivavaha Ny mahita ny fitiavana marina dia hanampy antsika hiandry raha mbola ilaina ka hahalala ny fomba hamantarana izany.
1 Vavaka ho an'i Saint Anthony hahitana fitiavana ve ve izany?
1.1 Vavaka hahitana ny tena fitiavana
1.2 Vavaka ho an'i Saint Anthony any Padua hahitana fitiavana
1.3 Ny vavaka amin'i San Antonio hahitana ny fitiavan'ny fiainanao
2 Azoko atao ve ny manao ny vavaka telo ho an'i San Antonio?
Vavaka ho an'i Saint Anthony hahitana fitiavana ve ve izany?
Matanjaka sy mahery izy io, indrindra fa raha manao izany amin'ny finoana sy avy amin'ny fo ianao. Ny tenin'ny Tompo dia mampianatra antsika, ao amin'ny iray amin'ireo fitantaran'ny fanekena vaovao tsy tambo isaina, fa ny fitiavana dia afaka manao ny zava-drehetra, manantena ny zava-drehetra, miaritra ary tsy mitsahatra.
Amin'izany fomba izany no ahafahantsika mahafantatra amim-pahafantarana raha fitiavana na zavatra hafa no tsapa. Betsaka ny milaza fa tia sy mandeha ny fotoana tsy hanaovana izany, araka ny tenin Andriamanitra, fa tsy mor.
Mamitaka ny fo mihoatra ny zavatra rehetra. Miova ny fihetseham-po raha fanapahan-kevitra ny fitiavana.
Ny mivavaka amin'Andriamanitra mpamorona ary mangataka azy hitari-dalana antsika hanapa-kevitra hoe iza no mendrika ny fitiavantsika ary iza no tsy tia, ary koa hamantatra hoe iza no nanapa-kevitra ny tena hitia antsika dia zava-dehibe satria manalavitra ireo toe-javatra mety hanaintaina isika.
Aza adino fa tsia vavaka izay atao amin'ny finoana tsy voavalya.
Mety ho vetivety io na ny valiny dia avy amin'ny toerana izay eritreretintsika kely indrindra, fa tokony hanana fahatokisana isika amin'ny fahalalana fa manao izay rehetra ankasitrahana Andriamanitra ary fantany ny tena filàntsika.
Vavaka hahitana ny tena fitiavana
Andriamanitro, ilay Mpamorona manome aina ho an'ny zavaboary rehetra. Ianao izay mahita ny zava-drehetra sy mahalala ny zava-drehetra, aza mijanona mitarika ny masonao amin'ny fiainako ary jereo hoe ahoana no fomba hanatsarana ahy dia ilay olona afaka manana ny tena fitiavana.
Raha ny toetrako dia tsy mety indrindra, raha tsy mifanaraka amin'ny fitiavana ny fomba fiainako sy ny fiainako, lazao amiko. Azafady mba lazao ahy ato am-poko izay rehetra mila fantariko momba ny teninao. Manakaiky ny sofiko ary omeo hevitra izay tokony hataoko aho. Aza avelanao aho isan'andro, miandry ilay fitiavana azo antoka, tsy fantatro fa izaho no tokony hiova.
Ry Andriamanitry ny lanitra, ilay avo indrindra sy mahatalanjona, matoky Anao aho. Fantatro fa ny teninao ao am-poko dia toy ny rano madio mandeha amin'ny renirano ary manadio ny zava-drehetra amin'ny alehany. Miandry ny teninao sy ny torohevitra rehetra ianao. Tsy andriko ny dikany. Te handray anao amin'ny fananako lalina indrindra aho. Fantatro fa ho ara-drariny, hendry ary marina izy ireo, ho mora amin'ny fiainako.
Satria ianao ny rariny, fahendrena sy fahamarinana. Ry Andriamanitry ny habakabaka, mampanantena anao aho fa hampihatra ny toro-hevitr'ireo manampahaizana anao ary hanaraka ny lalana nomarihinao ahy foana aho. Tariho aho amin'ity lalana ity mba hahafantarako ny lalana tokony harahina, araka ny lalàn'ny fitiavana foana. Mivavaka aho mba hanaja ahy lalandava ny hoaviko ary ho tia ahy tsy misy fepetra ary aleoko mihoatra noho ny hafa rehetra.
Ity vavaka ity dia tokony hatao amin'ny famelana ny safidintsika, tsy maintsy mieritreritra izay zava-dehibe kokoa noho ny fahatsapana isika, izay haharitra mandritra ny taona maro.
Azo tanterahina na aiza na aiza ny fitiavana fa ny fitiavana marina no aorina isan'andro. Izy io dia ekipa miasa izay ahafahantsika miantehitra amin'ny fanampian'ilay Andriamanitra nahary ny zava-drehetra.
Raha azo atao ny hahatanteraka ny fitiavana marina ary raha mahatoky ny herin'ny vavaka isika dia lehibe kokoa ny mety. Mivavaha mampiasa ny teninay ary miandry ny valiny.
Vavaka ho an'i Saint Anthony any Padua hahitana fitiavana
Ry Saint Anthony malala, ny olona tsara indrindra amin'ny olona masina rehetra, ny fitiavanao an'Andriamanitra sy ny fitiavanao ny zavaboariny dia nahatonga anao hanana fahefana feno fahagagana.
Tamin'ny teninao dia nanampy ny olona nanana olana na fanahiana sy fahagagana ianao tamin'ny alalàn'ny fanelanelanana nataonao. Miangavy anao aho mba hahazoana ahy ... (ambarao ny fangatahanao).
Ry olo-malemy fanahy sy malalanao, feno fangorahana olombelona mandrakariva ny fangatahako amin'i Jesoa Zanaka mamy, izay tia ny sandrinao ary handray mandrakizay ny fankasitrahin'ny foko. (Mivavaha telo amin'ny ray aman-dreninay ary telo ny Hail Marys.)
I Saint Anthony avy any Padua no olo-masina tiantsika hivavaka mba hahitana fitiavana marina. Afaka manampy anao hahazo fitiavana izy, ny olon-tianao, ny antsasany hafa, mifameno ny fiainanao.
Olona iray hafa noforonina manokana ho anao, aza misalasala fa izany no izy.
Mahery ny vavaka ary manampy antsika hitari-tena tsara ny angovo mba tsy ho resin'ny famoizam-po na hadisoana ny finoana hitady fitiavana izay tsy misy.
Ny vavaka amin'i San Antonio hahitana ny fitiavan'ny fiainanao
Masindahy Anthony Anthony, malaza sy malaza amin'ny fahagagana ataonao, omeo ahy ny Famindrampon'Andriamanitra hanatanteraka ny faniriako (hahazo mpiara-miasa).
Koa satria tsara fanahy amin'ny mpanota toa ahy toa ianao, aza mijery ny hadisoako, diniho ny Voninahitr'Andriamanitra hamela ny heloko, omenao aho ny fangatahana hataoko aminao mafy. Saint Anthony mahatalanjona ny fahagagana, fampiononana ireo ory, mangataka fanampiana aminao amin'ny lohalika aho ary ho mpitari-dalana ahy. Tonga nanampy anao aho tamin'ny fangatahana iray ary namelombelona ny foko ory sy be fitiavana aho.
Raiso ny fanoloran-tenako sy ny fitiavako anao. Manavao ny fampanantenako aho hiaina amin'ny fitiavana anao ry Saint Anthony, Andriamanitra sy ny mpiara-monina amiko.
Misaora ahy amin'ny fangatahako, omeo ahy ny fahasoavana hiditra ao amin'ny Fanjakan'ny Lanitra indray andro, ahafahako mihira ireo famindrampon'ny Tompo mandrakizay.
Hihaino anao i Sn Antonio ary hanampy anao mandritra ny fizotran'izay hahitanao ny fitiavan'ny fiainanao.
Rehefa hitanao fa mitovy ihany, dia afaka manontany azy foana ianao hanohy hitarika ny diany sy ny fanapahan-kevitra amin'ny fotoana rehetra.
Manan-kery ny vavaka, manàna finoana ary matoky fa hanao ny ambiny izy.
Azoko atao ve ny manao ny vavaka telo ho an'i San Antonio?
Te-hivavaka bebe kokoa noho ny vavaka ve ianao mba hahitana ny tena fitiavana?
Afaka manao azy.
Afaka ary tokony hivavaka ny vavaka rehetra tsy misy fetra. Afaka mivavaka am-bavaka izy ireo tsy misy olana.
Tsarovy fa ny tena zava-dehibe dia ny hananana finoana betsaka an’Andriamanitra sy any San Antonio.
Amin'izany fomba izany dia hahazo ny fanampiana azo atao indrindra ianao hahazoana ny fitiavanao.